PRIVATE, FURNISHED, LAKEFRONT LOG HOME - 5.85 Acres | Finday manokana
Brenda Thompson - Tetikasa ara-barotra momba ny varotra sy mpividy
Inona no fananana manokana hitadiavana?
Hamidy ny tranonao
Manorata ny tokotaninao tokana!
Singa miavaka ho an'ny varotra
Trano fonenana sy trano mimanda
Trano manan-tantara sy trano
Tokantrano maoderina / eklatika
Trano trano fivarotana, miangona ao amin'ny trano fiangonana iray
Trano fonenana tokana
Fialamboly tsy mahazatra
Toeram-ponenana hafa tsy mahazatra
PRIVATE, FURNISHED, LAKEFRONT LOG HOME - 5.85 Acres
Home » Listings » PRIVATE, FURNISHED, LAKEFRONT LOG HOME - 5.85 Acres
Tahaka ny trano fialofana mialohan'ny fialofana vaovao - 5.85 Private Acres
Mahavariana ny Lakandrano Manodidina ny Asheville! Mipoitra avy amin'ny rano, jiro, ary gisa ny maraina miposaka. Ny masoandro dia manaisotra ny ranomandry eny am-pito mandritra ny andro iray mahafinaritra eo amin'ny farihy. Toy ny trano feno trano fonenana feno tanteraka dia manopy maso ny farihy tsara tarehy. Io toerana tsy miankina io, izay misy gorodona eo ambanin'ny 6 acres, dia mangalahala amin'ny lobolobo eny an-tendrombohitra ary ahitana ala kely ahitam-ponenana, ala mikitroka, farihy farafahakeliny, garazy fatoriana ho an'ny trano fandroana, fikojakojana goavam-be, dian-tongotra mivoaka ao anaty rano, ary sompitra.
Ao anatiny, mameno ny tsiranoka ny pinewood. Mampamirapiratra ny fanambanin'ny hazo ny masoandro. Ny varavaran'akanjon'ny varavarankely dia manasa ny efitrano malalaka. Ny lavarangana lehibe ao amin'io trano fisakafoanana amoron-dranomasina io dia mamela hazavana midadasika maro. Mahafinaritra ho an'ny fialan-tsasatra, ny efitrano tsirairay dia manana ny fandroana feno azy ireo, misy bar iray misy ranom-boankazo sy fantsom-paty, sifo-joron'ny lakeside, gilasy, ary vato lehibe. Ny lakozia misokatra dia manamboatra ny nosy marobe sy ny gorodona marobe, fitaovana vy tsy misy rongony, sobika feno pine sy boaty malefaka.
Mivilia miala amin'ny. Ny trano dia tsara tarehy sy feno tanteraka amin'ny lovia, lamban-jiro, fitaovana am-bava, fitaovan'ny atrikasa, sns. Tsy mbola tao anatin'ny fandaharanasam-pamokarana velively - fa mety ho izany! Na dia rafitra mangarahara aza ny eo an-toerana sy ny fahazoan-dalana azonao atao hanamboarana trano iray hafa amin'ny iray amin'ireo faritra mifanaraka amin'ny fividiananao!
Ity trano famakiam-bokatra eny amoron-dranomasina ity dia hita ao amin'ny fitadiavana, Mills River, minitra 14 minitra monja avy eo Asheville Airport ary ny safidinao ny fivarotana sy trano fisakafoanana tena tsara!
Jereo ny lahatsary YouTube
"Ny fampahalalana dia azo itokisana nefa tsy voamarina."
Address: 71 Yonder Trail
Kaody positaly: 28759
Taona namboarina: 2011
Feo kodiarana: 2207
efitra fandroana: 3
Previous ListingGreen-Built Home Near Chapel Hill, NC - 3.3 AcresNext ListingFiangonana niova fo niaraka tamin'ny Ocean Views - Aostralia
Vonjeo ny anarako, ny mailaka, ary ny tranonkala ato amin'ity tranonkala ity amin'ny manaraka amin'ny fanamarihako.
Avelao hivarotra ny fanananareo tokana izahay
Hanova ny endriky ny tranonareo - Aleo ny "Finds ...". Hahafantatra ny tranonareo izahay - soraty ny momba azy io amin'ny fampiasana ireo teny marina izay haneho ireo toetra miavaka. Dia hanangana "Property Story" sy fanentanana ara-barotra natao mba hahatsikaritra anao ianao ary hahita ilay mpividy tonga lafatra amin'ny fitadiavana trano tahaka ny anao.
Omeo antso izahay mba hanombohana ny "Fikarohana" manokana nataonao:
Ahoana no hividianana trano? Fandraisana trano tokana
Tetikasam-pahaizana manokana momba ny varotra
Ampifanaraho amin'ny fikarohana ny "Findainao manokana" manokana
Copyright © rehetra Rights Reserved 2016
Manomboha nitendry sy Potsero ny Enter raha hikaroka
Green-Built Home Near Chapel Hill, NC - 3.3 Acres
Fiangonana niova fo niaraka tamin'ny Ocean Views - Aostralia